June 18, 2020 - PARIJATMEDIA
“ब’म्जनको आ’श्रममा प्र’हरीको छापा,भे’टिएनन् ब’म्जन”
काठमाडौं– आफूलाई लिटिल बुद्ध भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जनको सिन्धुलीस्थित आश्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईवी)ले छापा मारेको छ ।हत्या र बलात्कार अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका बम्जनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले छापा मारेको हो । सिआईवी प्रमुख डिआइजी सहकुल थापाका अनुसार, प्रहरीले आश्रममा छापा मारेपनि बम्जनलाई फेला पार्न भने सकेन ।बम्जन माथि २०७२ मा आश्रममा आएका अनुयायीहरुको हत्या र बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो । यसअघि ४ माघमा समेत प्रहरीले छापा मारेको थियो । यो बम्जनको आश्रममा छापा मारेको दोस्रो पटक हो ।सीआईबीको टोली बिहीबार कुकुर सहित बम्जनको आश्रम पुगेको थियो । ठूलो जंगलको बीचमा उनको आश्रम भएको कारण उनी त्यहीँ जंगलबाट भागेको अनुमान प्रहरीको छ ।
नाक नभएको बच्चा चर्चामा (भिडियोसहित)
अमेरिकामा नाक नभएको बच्चा जन्मिएको छ । केहि समय पहिले समाचारमा मात्र आएपनि अहिले भिडियो नै आएको छ । यो भिडियो धेरैले हेरिसकेका छन् । नाक नभएको बच्चाको नाम एलि थामसन हो । नाक नभएको कारण सास फेर्नलाई त्यति सानो बच्चाको घाँटीमा प्वाल पारिएको छ । घाँटीको प्वालबाट कहिलेकाहि दुध पनि निस्कने गरेका परिवारे बताएका छन् । कंजेटियल हर्निया नामको रोगबाट पिडित त्यो बच्चाको लागि आमा ब्रेन्डी र बुवा ट्राय दिन रात खटिने गरेका छन् । एजेन्सी
यस्तो टापु जहाँ नयाँ बासिन्दा’लाई निशुल्क जमिन, खाना र मासिक भत्तास’मेत दिइन्छ।
एथेन्स– विश्वका विभिन्न स्थानमा जनसङ्ख्या बढेर वातावरणजन्य तथा अन्य किसिमको समस्या आउने गरेका छन् । विश्वमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नका लागि परिवार नियोजन तथा अन्य किसिमको कार्यक्रम लागू हुने गरेको छ । तर, ग्रिसमा यस्तो टापु छ, जहाँ जनसङ्ख्या घट्दै जान थालेपछि त्यहाँको प्रशासनले नयाँ बासिन्दालाई आकर्षित गर्न निशुल्क खाना, जमिन र मासिक भत्ता दिने योजना अघि सारेको छ । सुन्दर निलो समुद्र र घमाइलो मौसम हुने ग्रिसको एन्टिकिथारा टापुको प्रशासनले त्यहाँ गई नयाँ जीवन शुरु गर्नेलाई हरेक महिना ४५० पाउण्ड अर्थात् करिब ६३ हजार नेपाली रुपैयाँ भत्ता दिने योजना अघि सारेको हो । पछिल्ला केही वर्षमा त्यहाँको जनसङ्ख्या ३ सयबाट घटेर केबल २४ मा झरेपछि एन्टिकिथारा टापुको प्रशासनले टापुको समुदायलाई गतिशील बनाउन यस्तो योजना ल्याएको हो । त्यहाँ जाने नयाँ बासिन्दाले त्यहाँ माछा मार्ने व्यवसाय, कृषी तथा बैंकिङ
श्री पाथीभरा माईको दर्शन गरी भोलिको राशिफल हेर्नुहोला।
वि.सं.२०७७ असार -५, शुक्रवार,ई.सं.२०२० जून -१९ ,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० तछलागा,प्रमादी,उत्तरायण,ग्रीष्म,आषाढ कृष्णपक्ष तिथि-त्रयोदशी , १०:३७ बजे उप्रान्त चतुर्दशी,नक्षत्र-कृत्तिका , १०:४६ बजे उप्रान्त रोहिणी,योग-धृति , १५:४० बजे उप्रान्त शूल, करण – वणिज १०:३७ बजेदेखि भद्रा , २३:०८ बजे उप्रान्त नाग, चन्द्रराशि-वृष,आनन्दादि योग-छत्र, सूर्योदय-५:१०, सूर्यास्त-१९:००, दिनमान-३४ घडी ३६ पला, दिल्लाचह्रे पूजा। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – कुनै पनि बिषयमा दिईने प्रश्तुतिले अरुको ध्यान आकर्षित गर्न नसकिने हुनाले अलि बिढनै तयारि गर्नुहोला । पारिवारिक माहोलामा जमघट भई स्वादिष्ट भोजन लिने अवसर आएपनि स्वास्थ्मा समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिुनहोला । अध्ययनमा सफलता हात पार्न अलि बढि समय खर्चनु पर्नेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाव हुनेछ भने घर परिवार तथा पति पत्निबिच घरायसि कुरामा बिवाद हुँन
शरीरका अनावश्य’क रौं कसरी हटा’उने ?
शरीरमा अनावश्यक रौं आएर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने चि’न्ता नलिनुस्, ब्यूटीसियन नीरु श्रेष्ठले घरमै अनावश्यक रौं हटाउने केही उपाय दिएकी छिन् । उनको सुझाव यस्तो छ : घरमै ट्वीजडको सहारामा अनावश्यक रौं हटाउन सकिन्छ । टुइजर्डबाट रौं हटाउनाले अधिक दु’खाइ हुनेछ, छाला पनि रातो हुनेछ तर यसलाई रोक्ने उपाय पनि छ । त्यसका निम्ति, आइब्रो गर्नुअघि तल्लो सतहमा पाउडर लगाउनुहोस् र आइब्रो गरिसकेपछि मज्जाले मोइश्चराइजरले ३ देखि ५ मिनेट म साज गर्नुहोस् । यो १५ देखि २० दिनको अन्तरालमा मात्रै गर्नुहोस् । छिटो छिटो गर्दा छालामा चाउरी पर्ने सम्भावना हुन्छ । -घरमा मोम स्ट्रिपहरू छन् भने, तिनीहरूलाई सानो टु’क्रामा का’ट्नुहोस् र अनावश्यक रौंहरु हटाउनुहोस् । ओठको माथिल्लो भागको रौं हटाउने यो सहज तरिका हो । यसले अप्पल लिपमा भएका अनावश्यक रौंहरु सजिलैसंग सफा पारेर निकाल्न मद्धत गर्छ । यो प्रयोग गर्नुअघि एकपटक
भारतसँग युद्ध गर्न खोजे’को भन्दै चीनविरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन!
काठमाडौँ। चीन भारतको सिमा गल्वान भ्यालीमा २० भारतीय सेनाका जवानले ज्या’न गुमाएपछि त्यसको तरंग नेपालसम्म आइपुगेको छ। चीनले आवेगमा आएर भारतमाथि ह’मला गरेको भन्दै भारत समर्थक एक संस्थाले चीनवि’रुद्ध काठमाडौँमा प्र’दर्शन गरेको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल नाम गरेको उक्त संस्थाले चीनलाइ विवेकको प्रयोग गर्दै यु’द्धको कुनै पनि सम्भावनालाई खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौँको सडकमा चीन वि’रुद्ध उ’त्रिएको उक्त समाजले बिहीबार काठमाडौंस्थित चीन र भारत दुवै देशका राजदूतावास अगाडि धर्ना दिँदै कू’टनी’तिक स्तरबाटै स’मस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । लद्दाख सीमामा चीन र भारतबीच सोमबार राति भएको हिं’सक झ’डपपछि दुई देशबीच त’नाव बढेको छ । झ’डपमा २० जना भारतीय सैनिकको मृ’त्यु भएको छ भने चीनतर्फ पनि मा नवीय क्ष’ति भएको बताइएको छ । चीनले भने मा नवीय क्ष’तिका बारेमा अहिलेसम्म जानकारी दिएको छैन ।
ओभरटेक’ले मुग्लिन सडक अस्तव्यस्त १५ किलोमि’टर बढी जाम!
चितवन । मनसुनको शुरुआतीसँगै चितवनको मुग्लिन नारायणगढ सडकमा पुनः सास्ती शुरु भएको छ । पहिरोले उक्त सडक अहिले अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। बुधबार ख’सेको पहिरोले अस्तव्यस्त भएको सडक आज दिनभर एकतर्फी सञ्चालन भयो तर चापका कारण कछुवाको गतिमा पनि सवारी पास हुन सकेको थिएन । राम्ररी सवारी सञ्चालन हुन नसक्नुमा सबैभन्दा बढी चालक कारक बन्न पुगेको देखिन्छ । छिटो जाने हतारोमा उनीहरुले लापरवाही गरिरहेका अन्य चालकहरु नै आरोप लगाउँछन् । चालकले दोहोरो लाइन पछि पनि ओ’भरटेक गर्दा गाडी पास हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा सडक चौडा पारिएकाले तेहोरो लाइनमा पनि सवारी गन्तव्यमा गएका देखिए पनि यहाँको कालीखोला पुल, जलविरेको घुम्ती, टोपे खोलालगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका पुल र घुम्तीमा मुस्किलले दोहोरो गाडी चल्छ । ठूला ट्रक तथा ग्यास ट्याङ्कर आएको बेलामा दुई गाडी पास हुनसमेत समस्या पर्ने गरेको एक जना चालक कृष्ण परिया
भारतलाई चीनको चेतावनी–‘सीमामा तना’व बढे चीन पाकिस्तान र नेपाली सेना’को दबाब झेल्नुपर्नेछ!
काठमाडौं। गलवान उपत्यकामा भारत र चीनको झ’डप भएपछि चीले भारतलाई क’डा चेता’वनी दिएको छ । चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले सीमा क्षेत्रमा तना’व बढेमा भारतले चीनका साथै पाकिस्तानी र नेपाली सेनाको समेत द’बाब झे’ल्नुपर्ने चेता’वनी दिएको छ । ग्लोबल टाइम्सले सांकेतिक रुपमा तना’व बढेमा पाकिस्तान र नेपालले चीनको साथ दिने चेता’वनी दिएको हो । सोमबार राती भएको झड’पमा २० जना भारतीय सैनिक नि’धन पुष्टि भएको छ । चीनतर्फ पनि ठूलै क्ष’ति भएको दा’वी गरिएको छ तर आधिकारिक जानकारी आएको छैन । शांघाइ एकेडेमी अफ सोसल साइन्सका रिसर्च फेलो हु झियोंगको लेखमा अगाडि लेखिएको छ ‘अहिले भारतको चीनका साथै नेपाल र पाकिस्तानसँग पनि सीमा वि’वाद चलिरहेको छ । पाकिस्तान र चीनको नतिकको सम्बन्ध छ। नेपाल पनि हाम्रो सहयोगी हो । दुवै देश चीनको वन बेल्ट वन रोड परियोजनाका अंग हुन् ।’ ग्लोबल टाइम्स चीन सरकारको मुखपत्र मानिन्छ र यसम
सुशान्त सिंह राजपुतको फ्यानले बलिउड निर्देशक तथा निर्माता करण जोहरको पुत्ला जलाएका छन् । सुशान्तको जन्मगाउँ भारतको बिहार स्थित पटनामा सुशान्तको सुनियोजित ह-त्या भएको भन्दै उनको पुत्ला जलाएका हुन् । उनीहरुको यस्तो कदमलाई तपाइहरु के भन्नु हुन्छ ?
‘एमसीसी सम्झौता मै’ले गरेको हुँ’ यो देश’को हितमा छ’ : ज्ञानेन्द्र कार्की
काठमाडौं। काँग्रेस नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) देशको हितमा रहेको बताएका छन्। यो सम्झौता संसदबाट पारित हुनुपर्ने जिकिर समेत गरे। प्रतिनिधि सभामा बिहीबार बोल्दै कार्कीले यो सम्झौता आफू अर्थमन्त्री बन्दा गरेको बताउँदै धेरै व्यक्तिको यसमा योगदान रहेको बताए। उनले भने-‘एमसीसी नेपालको लागी गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो, यो परियोजना विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरुले सहभागिता जनाइसकेका छन्। त्यसैले यसको प्रयोग नेपालले पनि गर्नुपर्छ।‘ एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दलकै नेताले भ्र’म फैलाएको उनले आ’रोप लगाए। उनले भने-‘यो सम्झौताबाट अमेरिकी सेना नेपालमा आउने कुरा निराधार हो। यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन।’ कार्कीले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया ग्लोबल टेन्डरबाट हुने बताउँदै ती आयोजनाबाट नेपाली समाजको उन्नति हुने बताए। जानौं : प्याजको रस